Ilmo iska soo ridid - InfoFinland
Nolosha Finland > Caafimaadka > Ilmo iska soo ridid
Dalka Finland waxaa macquul ah inaad ilmaha iska soo tuurto markii uu uurku bilowga yahay ayadoo la eegayo xaaladahaan soo socda:
haddii dhalmadu ay caafimaadkaaga khatar ku noqon karto
haddii aad ka yar tahay 17 sano ama aad ka weyn tahay 40 sano
haddii aad horay u dhashay afar carruur
haddii aadn ilmaha xanaaneyn karin jiro awgeed.
Waxaa kaloo sabab u noqon kara ilma iska soo tuurka (abortti), in dhalmada ilmaha ama daryeelkooda ay noloshaada ku tahay culays weyn oo la dareemi karo. Ficliyan sabab waxaa u iska soo tuurida waxaa sabab u noqon kara mid ka mid ah arimaha soo socda:
Dumarku ayagaa xaq u leh inay go’aan ka gaaraan inay ilmaha iska soo ridaan. Lamaanuhu wuu ka qayb gali karaa go’aan gaarida haddii, ay haweeneydu dooneyso inay tixgeliso fikradiisa.
Haddii aadan qaan gaarin oo aad dooneysid inaad ilmaha iska soo rido, wax ruqsad ah ugama baahnid waalidiintaada. Si kastaba ha ahaatee inta badan waxaa wanaagsan inaad waalidinta kala hadasho. Si kastaba ha ahaatee haddii aadan dooneyn inaad sidaas samaysid, shaqaalaha daryeelka caafimaadku waa xirfadleyaal sir xajintu waajib ku tahay.
Ilma iska soo ridida ama aborshinka waa in la sameeyo inta ka horeysa usbuuca 12 aad ee uurka. Haddii ay jiraan sababo culus oo in la tixgeliyo mudan waqtigaas la soo sheegay kabacdi waa la sameyn karaa soo ridida, laakiin markaas waxaad u baahantahay ruqsada gaarka ah ee hay'ada ruqsada iyo komeerka u qaabilsan qaybaha caafimaadka iyo arrimaha bulshada (Valvira). Ruqsada hay'ada ruqsooyinka iyo kormeerka sidoo kale waxaad u baahantahay markii soo ridida loo sameynyo jiro xun ama curyaanimo daran oo ilmaha caloosha kujira ay qabaan awgeed. Weydii wixii dheeraad ah dhakhtarka rugtaada caafimaadka (terveysasema).
Haddii aad dooneysid inaad ilmaha iska soo rido, sida ugu dhaqsaha badan ula xiriir rugta caafimaadka ee xaafadaada, dhakhtarkana waqti ka qabso. Sidoo kale waxaad waqti ka qabsan kartaa dhakhtarka gaarka loo leeyahay, laakiin markii aad waqtiga ka qabsaneysid iska hubi in dhakhtarku haysto ruqsada hay'adda ruqsooyinka iyo kormeerida (Valvira) go’aan ka gaarida soo ridida awgeed. Haddii aad dooneysid waxaad la kulanka dhakhtarka u wadan kartaa lammaanahaaga. Dhakhtarku wuxuu kuu qoryaa warqad uu kuugu diraayo isbitaalka soo riditaanka lagu samaynayo.
Kalkaaliyaasha caafimaadka iyo dhakhaatiirta ayaa isbitaalka kugula sheekaysanaya. Si wada jir ah ayaad go’aan uga gaareysaan qaabka uurka loo joojinayo, arintaan waxaa saameyn ku yeelanaya inta uurku uu jiray iyo adiga ra'yigaaga.
Uurka waxaa lagu joojiyaa dawo ama soo xaaqid (kaavinta). Sida caadiga soo xaaaqida waxaa lagu sameeyaa caadi ahaan suuxin, markaas kadibna waa in isbitaalka la joogo dhawr saacadood.
Haddii joojinta uurka daawo loo isticmaalayo, daawada waxaa laga siyaa makaanka inta u dhaxaysa 1-3 maalmood, markaas ilmogaleenku bilaabayaa inu isku soo ururo isla markaasna uu faaruqo. Usii diyaar garow inaad u baahantahay dawooyinka xanuunka baabi'iya, markii ilmagaleenku uu is qabsanayo hadba. Mar marka qaarkood daawooyinka ka sokow waxaa loo baahan yahay soo xaaqid.
2-4 usbuuc kadib markii la sameeyey soo ridida, waxaa rugta caafimaadka laguugu sameynayaa hubin dambe.
Markii aad gaarto go’aanka aborshinka, waxaad cawinaad xagga niyada ah ka heleysaa tusaale ahaan kalkaalisada iyo dhakhtarka rugta caafimaadka. Wixii macluumaad dheeraad ah, oo la xiriira meelaha aad cawinaadka ka heli karto xaalada adag ee aad ku jirto awgeed waa InfoFinlandi bogga Caafimaadka dhimirka.
Ilmo iska soo rididFinnish | Iswidish
Ruqsada joojinta uurkaFinnish | Iswidish